China 17 mu 1 mhando c hub usb c 3.0 station usb-c hub docking station vagadziri nevatengesi |Wellink
17 mu 1 mhando c hub usb c 3.0 station usb-c hub docking station
Muenzaniso : C-S006
Tora 3 USB-A data ports
1 USB-C Power Delivery yekuchaja chiteshi
1 RJ45 port- yese mune imwe hub
USB 3.1 Type-C Mukadzi
3*USB3.0 A/F (5Gbps chiyero)
1*Type-C Mukadzi (yePD3.0 60w)
3*USB3.0 A/F (5Gbps rate) / 1*Rudzi-C Mukadzi (ye PD3.060W,W/data5Gbps) / 1*RJ45(100Mbps) / 1*Audio(W/Mic)
2* HDMI (4k 30Hz) /2*Rudzi-C/F(5Gbps chiyero) /1*DP1.2(4k 30Hz) /1*VGA(1080P) /1* SD 3.0 /1*TF 3.0 /Aizwi (L/R) /Audio(Mic) / Ese maPorts aunoda
Chinja mabhaisikopo, mapikicha, uye mimhanzi nekumhanya kusvika ku5 Gbps kuburikidza ne USB-C data port uye mbiri USB-A ports
Crystal-yakajeka 4K Dual Monitor 2 HDMI:Iyo USB-C laptop docking station inopa 4K Output vhidhiyo data ine resolution inosvika 3840*2160@30HZ inoenderana nekuratidzwa kweakasiyana resolution, DP port inotsigira yakakura 3840*2160@30HZ yakazara HD.HD Output uye DP zvinobuda zvinogona kushandiswa panguva imwe chete, chiratidziro chinongodzokorora uye kwete kuwedzera uye resolution yepamusoro yezviteshi zvese zviri zviviri ndeye 1080P.One DP kubuda imwe sikirini yelaptop chete yeWindows Laptop.YeMac OS zvachose maviri akasiyana emukati.
Type-C Port&PD&Gigabit Ethernet:Iyo 3 USB 3.0 Ports uye SD/ TF 3.0 kadhi slots inogona kutamisa mimhanzi, mafirimu, mafaira makuru uye nezvimwe pamwero wekukurumidza kusvika ku5 Gaps. Iyo 2 USB 2.0 ports inotsigira 480Mbps.Max 61W PD Chargingpower delivery (PD3.0) .Kusvika pa61W ichichaja masources akadai se USB-C Laptop/MacBook.Ndapota ita shuwa kuti mudziyo wako unotsigira simba rekutumira protocol.Gigabit Ethernet port inotsigira 10/100/1000Mbps network kumhanya.
Kugarisana:Iyo hub hdmi usb c haienderani neese usb C mudziyo, ndapota tarisa yako laptop host mudziyo inotsigira vhidhiyo kubuda kana DP Alt Mode usati watenga.Kana hongu, iwe unogona kuona iyo DP-logo padyo nechiteshi.Inoenderana netunderbolt 3 zvishandiso, zvakaita seMacBook Pro 2019 2018 2017, MacBook Air2019/2018, iPad Pro 2018, Lenovo Yoga 720/910/920/930, Dell XPS13/15,Surface Laptop 3/3,Surface Laptop CANN1C3073,Dell Laptop 3/3 COT3 3/3. shanda neHP Pavilion/HP EliteBook/Lenovo
Convience USB C Docking Station:Indasitiri-inotungamira yehunyanzvi dhizaini ine Aluminium kunze shell.Compact dhizaini kutakura nyore muhomwe yako.*Exclusive Smart chip inopfupisa nguva yekuchaja nemagetsi ekutumira 3.0 (kumashure nePD 2.0), kudzivirira kuwandisa, over-voltage, over-current, short circuit, overcharge, voltage regulation, tembiricha yekudzivirira, sarudzo yakangwara yedocking station pasi pechengetedzo.Ongorora: Iwe uchawana 24-mwedzi yega yega USB C docking station uye hushamwari hwevatengi.
VL820/822:Inoiswa kuHUB ine USB3.0 interface, inosvika 4 U3 interfaces inogona kushandiswa, uye USB3.1 GEN2 mwero i10Gbps.
Ndinoita sei simba mudziyo uyu?Ndinofanira kutenga tambo yemagetsi here?
Iwe unongobatanidza kune chako kifaa, hazvidi simba rekunze.
Ne ipados 13, izvi zvichaenderana neipad pro 3r gen?
Vanodiwa, hongu, inotsigira
Iyo magetsi port inogona kuve usb yekubatanidza kune usb c monitor?
Iyo USB C port pamudziyo ndeyekuchaja iyo laptop uye kwete se USB C port.
Iyi hub inoenderana neMicrosoft's Surface Laptop 2?
Surface Laptop 2 haina usb c saka izvi hazvishande
Inotsigirwa Systems:Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X 10.6 kana gare gare, Linux 2.6.14 kana gare gare, iPad OS
Zvakapfuura: 5 mu1 Type- C HUB, HDMI, USB3.0, TYPE-C PD100w
Zvinotevera: 5 mu 1 mhando c hub usb c3.0 hub docking station usb-c hub